Muxuu Epublibre ushaqeyn la'yahay? Bal eeg kuwan beddelka ah | War gadget
Paco L Gutierrez | | La cusboonaysiiyay 14/09/2020 15:04 | Akhristayaasha, General
Haddii aad tahay akhriste buug, waxaa jira fursado badan oo aad adigu sidoo kale isticmaale ka tahay websaydhka Epublibre, maadaama ay shaki ku jirin bogagga ugu wanaagsan buugaagta bilaashka ah ee khadka tooska ah. Waa wax aad iyo aad u badan in la helo boggan hoos ama adeeg la'aan, sababtaas awgeed iyo maadaama aan sidoo kale jecel nahay akhriska, waxaan ka wada hadli doonnaa mawduucan iyo talo soo jeedinta beddelka shaqada hadda Epublibre hoos u dhacday.
Dhammaan munaasabadaha uu webku dhacay, wuxuu ku soo noqday shaqadiisa maalmo gudahood, laakiin dhibaatadu waxay tahay inay naga dhex gasho aqrinteena ama ay kharribto galabnimadii aan u maleynaynay inaan ku bixinno akhrinta buuggeenna waajibka ku ah. Hadda oo ay umuuqato inaan wajaheyno dhibaato culus, waxaan dib u eegeynaa beddelka ugu soo jiidashada badan si aan u beddelno, qaarkood ayaaba aad ufiican oo laga yaabo in qaarkoodna xitaa ay tahay ikhtiyaar kafiican xitaa hadii Epublibre si sax ah ushaqeyso.
1 Laakiin ... Waa maxay ama ahayd Epublibre?
1.1 Sidee loo helaa buugga 'Epublibre'?
2 Epublibre ayaa shaqeynaysay muddo dheer. Markale miyuu shaqeyn doonaa?
3 Ma heli karaa Epublibre xitaa marka ay hoos u dhacdo? Waxaa jira qaab laakiin leh xaddidaadyo.
4 Beddelka Epublibre
4.1 Buugaagta Amazon
4.3 Aan aqrino
4.5 Buuga Google
5 Talada Tifatiraha
Laakiin ... Waa maxay ama ahayd Epublibre?
Qaar ka mid ah akhristayaasha mararka qaarkood ama xitaa kuwa akhristayaasha joogtada ah ee aqriyay noloshooda oo dhan warqad, waxaan u sharaxeynaa waxa Epublibre yahay. Boggan wuxuu ku jiray shabakadda tan iyo 2013 wuxuuna ku guuleystay inuu soo ururiyo maktabad weyn oo buugaag ah. Haddii aan dib u eegno xog gaar ah oo ka soo cusbooneysiinteeda ugu dambeysay ka hor dhicitaankeedii ugu dambeeyay, waxaan arki karnaa in maktabad aan ka yarayn 41.756 buugaag la soo sheegay iyo ku dhowaad 120 buugaag dheeraad ah oo diyaarin ah. Maktabaddu waxay inta badan ku salaysnayd cinwaanno af Isbaanish ah, laakiin waxaan sidoo kale heli karnaa buugaag fara badan oo ku qoran luqadaha kale ee rasmiga ah ee jasiiradda sida Valencian, Galician, Euskera ama Catalan.
Sidee loo helaa buugga 'Epublibre'?
Si aad iskaga diiwaangeliso degelkan waxaa lagama maarmaan ah in akoonkeena la aqbalo, laakiin maahan diiwaangelin joogto ah, waa inaan galnaa liis sugitaan dheer oo aan ku qaadan karno waqti dheer ka hor inta aan la aqbalin.
Waxaa ka mid ah kuwa ugu guusha badan webka xaqiiqda ah inay leedahay buug loogu talagalay qaabeynta buugaagta, oo si buuxda looga heli karo jeldigiisa. Si aan u daabacno una tafatirno buugaagta waa inaan xubin ka noqonno webka. Laakiin si aad u soo dejiso buugaagta waxaa jira xorriyad buuxda, si qofkasta uu u heli karo soona dagsan karo buugaagta sida uu doono.
Dhammaan buugaagta Epublibre waxaa lagu heli karaa qaab ePub, in kastoo aan ka heli karno qaar ka mid ah qaabab kale. Qaabka ePub waa qaabka ay inta badan isticmaalaan akhristayaasha buugaagta ama AkhristayaashaIn kasta oo ay suurtagal tahay in lagu daawado qaabkan noocan ah qaar ka mid ah taleefannada casriga ah ama kombuyuutarrada, haddana haba yaraatee laguma talin karo sababta oo ah iftiinka buluugga ah ee looxyadiisa, waxay daalayaan indhaha si xad dhaaf ah. Soo degsashada waa inaan hubinnaa inaan rakibnay barnaamij loogu talagalay soo dejinta durdurka.
Epublibre ayaa shaqeynaysay muddo dheer. Markale miyuu shaqeyn doonaa?
Xaqiiqdu waxay tahay in Epublibre maanta aan la heli karin haddii aan ka soo galno biraawsarkayaga adoo galinaya cinwaanka webka, ma ahan markii ugu horreysay ee xaalad la mid ah ay ku sii jirto waqtiga, Epublibre waxaa soo maray dhibco aad u tiro badan marar badanLaakiin waqti dheer ayey qaadatay markii ay la kulantay hoos u dhac intaa le'eg waqtiga.
Waad soo noqon kartaa hubaal wuu soo noqon karaa, ama boggaaga ama mid kale. In kasta oo wax waliba ay muujinayaan inay sii socon karto waqtigeeda si aan u helno nafteena kahor websaydhka shaqeeya ee 100%. Dhibaatadu waxay tahay in xog qaldan ay xukunto, maxaa yeelay Epublibre kuma laha xisaab nooc rasmi ah shabakadaha bulshada, sidaa darteed kama heli karno nooc kasta oo isgaarsiin ah kuwa horumariya.
Tan iyo markii ay dhacday, qaar ka mid ah xisaabaadka Twitter-ka ayaa soo ifbaxay laakiin inkasta oo ay u muuqdaan inay rasmi yihiin, haddana ma ahan. Xisaabta "rasmiga ah" ee aan ka helnay wax macluumaad ah ayaa ah tan qofka mas'uulka ka ah dayactirka adeegyada martigelinta ee Epublibre, akoonkiisa uu ku daabacayo warar ku saabsan.
Koontada gaarka ahi waa @TitivillusEPL taas oo sida ku cad macluumaadkii ugu dambeeyay ay ku sheegtay in wax yar u hadhay Epublibre si ay mar kale u hawl gashoWaxaan u leeyahay tan hadda waa la joojiyay, markaa ma arki karno boggaaga Twitter-ka ama daabacaadahaaga. Ma garanayno sababta, laakiin koontada waxaa xanibay dhexdhexaadiyayaal Twitter ah.
Ma heli karaa Epublibre xitaa marka ay hoos u dhacdo? Waxaa jira qaab laakiin leh xaddidaadyo.
Habka loo maro Epublibre xaaladdeeda hadda. Adeeg loo yaqaan archive.org kaasoo mas'uul ka ah ilaalinta bogagga shabakadda si aysan u lumin waxyaabaha ay ka kooban yihiin xaaladaha sidan oo kale ah. Marka waad booqan kartaa degello internet oo aan la heli karin iyo sida kiiskan mar dambe lama heli karo.
Adiga oo adeegsanaya cinwaankaaga archive.org waxaan si caadi ah uga heli karnaa shabakadda. Laakiin leh xaddidaadyo muhiim ah, Ma awoodi doonno inaanu galno ama galno waxyaabo badan oo aan la duubin at Archive.org. Kuwaas waxaa ka mid ah soo dejintii ugu dambeysay ee bogga, maaddaama archive.org ay keyd u sameyso waqti ka waqti. Ma ahan wax qumman laakiin ugu yaraan waxaan heli doonnaa marin.
Waxaan dib u eegi doonnaa waxyaabaha ugu wanaagsan ee Epublibre loogu talagalay akhrinta buugaagta qaabab kala duwan ah, badankooduna gebi ahaanba waa bilaash, laakiin qaar ayaa laga yaabaa inay leeyihiin nooc ka mid ah rukummada koowaad.
Dukaanka hooyada ee dukaamada oo dhan, horeyba waa dukaanka ugu caansan ee khadka tooska ah ee abid, iyo sidoo kale mid ka mid ah adeegyada iibka ka dib ugu fiican ayaa leh (aniga ayaa ugu fiican), sidoo kale waxay ka mid tahay faa'iidooyinka ay leedahay in la helo maktabad buugaag weyn haddii waxaad tahay xubin koowaad. Noocyada suugaanta ee afkeenna, sida shaqooyinka Cervantes, Lorca ama Miguel Hernandez ... iwm Ma iloobi karo shaqooyin ajnabi ah oo loo turjumay Spanish, iyadoo ay suurtagal tahay in lagu soo dejiyo luqadooda asalka ah
Amazon marka lagu daro dhammaan dalabkan buugaagta ah ee lagu daray rukunkaaga rasmiga ah, waxay sidoo kale bixisaa buugaag badan xitaa haddii aadan xubin ka ahayn, laakiin qiimaha € 36 sanadkii Waxaan u maleynayaa inay tahay ikhtiyaar aad u wanaagsan, maaddaama lagu daro adeeggan buuggan, waxaan sidoo kale haysannaa kuwo kale oo badan, oo ay ku jiraan kuwa dukaanka ku jira ama fiidiyowga koowaad. Waxaan heli doonaa qiimo dhimis macquul ah oo aan ku soo iibsanno a Kindle Paperwhite oo aan horey ugu sameynay falanqeyn ActualidadGadget.
Hore ayaan uga hadalnay degelkan mar hore maqaalka, illaa iyada oo loo marayo waxaan ku heli karnaa Epublibre xitaa marka ay hoos u dhacdo. Sidoo kale degelkan waxaan ka heli karnaa wax ka badan 18.000 buug oo Isbaanish ah. Haddii aan ku darno dhammaan buugaagta jira oo ku qoran dhowr luqadood, waxaan ku darnaa wadar ahaan 1,4 milyan buugaag. Waxaan si fudud u soo dejisan karnaa waxyaabo badan, labadaba PDF sida ePUB, cinwaanadaas oo dhan oo aad noo xiisaynaya.
Shaki la'aan waa mid ka mid ah ilaha ugu waaweyn ee dhaqanka qoraalka ah ee aan ka heli karno internetka, mid ka mid ah kuwa loogu talinayo hadda maadaama Epublibre uu shaqeynayo.
Guji tan Link Si aad uhesho
Xaaladdan oo kale waxaan kugula talin doonnaa a adeegga la bixiyo ee ka hooseeya rukunka billaha ah, in kastoo aan leenahay suurtogalnimada in la tijaabiyo ka hor 30 maalmood. Diiwaangelintu waxay na siinaysaa in ka badan 1000 buug oo qoran, iyo sidoo kale tiro aad u tiro badan oo buugaag maqal ah, oo ah wax muhiim u ah kuwa leh caafimaadka indhaha ee jilicsan ama jecel inay dhagaystaan ​​inta ay ku nasanayaan ama ku nasanayaan sariirta.
Cinwaanada waxaa loo kala qaybiyaa inta udhaxeysa iibiyaasha ugu fiican, kuwa fasalada iyo sheekooyinka cusub. Waxaan haynaa codsi macruufka iyo Android, sidaas darteed waxay noqon doontaa mid aad u raaxo leh haddii aan dooneyno inaan ka helno qalab leh nidaamyadan hawlgalka. Waa mid ka mid ah faa'iidooyinka badan ee la bixinayo, maadaama ay, hab ahaan, u tahay Netflix buugaag.
Akhriso, waxbarto oo koraan waa hal-ku-dhiggooda. Waxay u qaybsan tahay 3 qaybood, «Buugaagta lagu taliyay», «Buugaag iyo qoraallo ku qoran PDF» y «Kheyraadka hagaajinta akhriskaaga», mawduucyada xiisaha weyn u leh xulashada buugaagta. Sii buugaag iyo qalab ruqsad haysta oo bilaash ah Creative Commons (waa urur aan faa'iido doon ahayn oo u heellan kor u qaadista helitaanka iyo is-dhaafsiga dhaqanka).
Shirkad kale oo weyn oo waliba ka qeyb qaadata dhaqanka qoraalka ayaa ah Google. Marka lagu daro bixinta adeegyo aan tiro lahayn ama mashiinka raadinta internetka heer sare, waxay leedahay maktabad ballaadhan oo buugaag elektiroonig ah. Mid baan helaynaa buugaag aad u tiro badan oo qaab digital ah luqad kasta, oo ay ku jiraan Isbaanishka.
Buugaagta ka sakow, waxaan marin u leenahay joornaalada iyo joornaalada sidaa darteed dalabkoodu aad buu u kala duwan yahay. Waa ikhtiyaar aad u sax ah haddii aan rabno inaan wax akhrinno mararka qaarkood, laakiin kuma talinayo inay tahay isha ugu weyn haddii aad jeceshahay inaad aqriso buugaag. Maaddaama badankood la aqrin karo oo aan la soo dejin karin.
Fikradayda hooseeya haddii hiwaayadahaagu akhrinayo buugaag, Shaki la'aan, ikhtiyaarka ugufiican waa helitaanka Kindle buug elektaroonig ah oo laga helo Amazon, maaddaama kuwani leeyihiin boggag leh tiknoolajiyad aan aad u dagaal badanayn oo leh aragti iyo qiimo si cadaalad ah u kooban, marka lagu daro Waxaan kugula talinayaa inaad iska qorto Amazon prime, kaas oo naga siin doona marinka mid ka mid ah maktabadaha buugaagta ugu waaweyn, oo leh faa'iidooyin kale oo badan oo aad u xiiso badan, sida dhoofinta bilaashka ah ee dukaankaaga ama adeegga fiidiyowga ee Premium oo leh taxane iyo filim aad gacanta ku hayso.
Hadaad u malaynayso inuu jiro Beddelka ugu fiican Waxaan ku farxi doonnaa inaan ku aqrino fikradahaaga qeybta faallooyinka.
Wadada buuxda ee maqaalka: War gadget » qalabka » Akhristayaasha » Muxuu Epublibre ushaqeyn la'yahay? Bal eeg kuwan kale
Waad ku mahadsan tahay wax ku biirinta Marianito!
Waad ku mahadsan tahay Marianito soo dirista xiriiriyaha, bog aad u xiiso badan. salaan
Kumbuyuutarkayga: Magaca Model: MacBook Pro, mac OS Big Sur
Aqoonsiga Model: MacBookPro14,3
Processor Magaca: Intel Core i7 Quad Core
Xawaaraha processor: 2,8 GHz
Tirada hawlwadeenada: 1
Tirada guud ee diirkja: 4
Kaydka Heerka 2 (halkii xudun): 256 KB
Kaydka Heerka 3: 6 MB
Farsamada-xadhkaha sare leh: Waa la dajiyay
Xusuusta: 16 GB
Nooca nidaamka firmware: 447.80.3.0.0
Nooca SMC (nidaamka): 2.45f5
App-ka Kindle kuma shaqeeyo kombayutarka Apple. Malaha maaha mid kumbiyuutarka Apple ah. Haa waxay ku shaqeysaa ipad iyo iPhone.
Waxaan u mahadcelin lahaa sharraxaad waxaana rajeynayaa in xal la helo
Jawaab Jorge Acevedo
Huawei Watch GT2 Pro: Daawashada ugu dhameystiran ilaa taariikhda